Ku kala duwan yahay qalabka, Adventure
Muusiga - Maqal
Guriga › Ciyaaraha › Archive by Category "Adventure"
Qaybo waxtar leh
BehApk - Soo deji APK Android oo bilaash ah - © Dhammaan xuquuqaha way xifdiyeen
Waxaan u isticmaalnaa cookies-ka boggayaga si aan ku siino waayo-aragnimada ugu habboon annaga oo xasuusanna dookhyadaada oo ku celcelino booqashooyinka. Adigoo gujinaya "Aqbal", waxaad ogolaatay isticmaalka dhammaan cookies-ka.
Ha iibin macluumaadkayga gaarka ah.
Mareegtan waxay isticmaashaa cookies si ay u wanaajiso khibradaada intaad dhex marayso mareegaha. Kuwaas oo ka mid ah, cookies-ka loo kala saaray sidii loo baahnaa ayaa lagu kaydiyaa browserkaga maadaama ay lama huraan u yihiin shaqada aasaasiga ah ee shabakada. Waxaan sidoo kale isticmaalnaa cookies-ka qolo saddexaad oo naga caawisa falanqaynta iyo fahamka sida aad u isticmaasho degelkan. Kukiyadan waxa lagu kaydin doonaa barowsarkaaga kaliya ogolaanshahaaga. Waxa kale oo aad haysataa ikhtiyaarka ah inaad ka baxdo cookies-kan. Laakin ka bixida qaar ka mid ah cookies-kan waxay saameyn kartaa khibradaada wax raadinta.
Kukiyada lagama maarmaanka ah ayaa gabi ahaanba lama huraan u ah in mareegaha uu si sax ah u shaqeeyo. Kukiyadani waxay xaqiijinayaan shaqada aasaasiga ah iyo sifooyinka amniga ee shabakada, si qarsoodi ah.
cookielawinfo-checkbox-analytics 11 bilo Buskudkan waxa dejiyay GDPR Kukiga Oggolaanshaha Plugin. Buskudka waxa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo oggolaanshaha isticmaale ee cookies-ka qaybta "Falanqaynta".
cookielawinfo-checkbox-shaqaale 11 bilo Buskudka waxa dejiyay ogolaanshaha buskudka ee GDPR si loo duubo ogolaanshaha isticmaale ee cookies-ka qaybta "shaqeeya".
cookielawinfo-checkbox- lama huraan ah 11 bilo Buskudkan waxa dejiyay GDPR Kukiga Oggolaanshaha Plugin. Kukiyada waxaa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo oggolaanshaha isticmaale ee cookies-ka qaybta "lagama maarmaan".
cookielawinfo-checkbox-kale 11 bilo Buskudkan waxa dejiyay GDPR Kukiga Oggolaanshaha Plugin. Buskudka waxa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo oggolaanshaha isticmaale ee cookies-ka qaybta "Mid kale.
cookielawinfo-checkbox-waxqabadka 11 bilo Buskudkan waxa dejiyay GDPR Kukiga Oggolaanshaha Plugin. Buskudka waxa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo oggolaanshaha isticmaale ee cookies-ka qaybta "Waxqabadka".
la eegay_ siyaasada 11 bilo Buskudka waxa dejiyay bakhtiyaarka Oggolaanshaha Kukiyada ee GDPR waxaana loo isticmaalaa in lagu kaydiyo bal in isticmaaluhu ogolaaday isticmaalka cookies-ka iyo in kale.. Ma kaydiso xog shakhsi ah.
Kukiyada shaqaynta waxay caawiyaan in ay qabtaan hawlo gaar ah sida wadaaga waxa ku jira bogga shabakadaha warbaahinta bulshada, soo ururiyaan jawaab celin, iyo astaamo kale oo dhinac saddexaad ah.
Kukiyada waxqabadka waxaa loo isticmaalaa in lagu fahmo oo la falanqeeyo tusmooyinka waxqabadka muhiimka ah ee mareegaha kaas oo ka caawiya bixinta khibrad isticmaale oo ka wanaagsan booqdayaasha.
Kukiyada falanqaynta ayaa loo adeegsadaa si loo fahmo sida booqdayaashu ula falgalaan mareegaha. Kukiyadani waxay caawiyaan bixinta macluumaadka cabbirada tirada booqdayaasha, heerka boobka, isha gaadiidka, iwm.
Kukiyada xayaysiinta ayaa loo isticmaalaa si loo siiyo booqdayaasha xayaysiisyada iyo ololayaasha suuqgeynta. Kukiyadani waxay la socdaan booqdayaasha dhammaan mareegaha waxayna ururiyaan macluumaadka si ay u bixiyaan xayeysiis la habeeyey.
Kukiyada kale ee aan la kala saarin waa kuwa la lafaguray oo aan weli loo kala saarin qayb.